Amakhamera wokubhekwa kwevidiyo anokuvikelwa okungu-360 | Izindaba zegajethi
Amakhamera wokubhekwa kwevidiyo anokuvikelwa okungu-360
Izindaba zamagajethi | 17/07/2021 00:05 | Gadgets, Ubuchwepheshe
Amakhamera wokuqapha ividiyo anokuvikelwa okungu-360 akuvumela ukuthi ulawule futhi uhlole isethi enkulu yezakhiwo esakhiweni, uhlukanise imibono yabo futhi usondeze isithombe ukuthola imininingwane yazo, ngaphandle kokulahleka kwekhwalithi yesithombe.
1 Iyini ikhamera yokubhekwa kwevidiyo engu-360?
2 Izinzuzo zalolu hlobo lwamakhamera
3 Ezokuphepha ngokuningiliziwe
Iyini ikhamera yokubhekwa kwevidiyo engu-360?
Ikhamera engu-360-degree iyithuluzi lobuchwepheshe lenoveli eline- ikhono lokuthatha izithombe noma ukurekhoda amavidiyo ngamalensi ebanzi, ezithwebula imvelo kusuka ngaphambili nangasemuva, ngaphezu kokufaka izinhlangothi, uphahla naphansi kwemvelo ngaphansi kombono wakho.
I-Las Amakhamera we-Movistar Prosegur Alarms asetshenziswa njengengxenye yezinhlelo zawo zokuphepha ukuze zuza indawo enkulu yokuvikela, ngokunembile ngoba ziphelele kakhulu futhi zifaka induku yokudlala yokulawula lokho kungasetshenziswa kusuka kuselula ngohlelo lokusebenza nokuxhumeka kwe-Wi-Fi.
Ngale ndlela, uzokwazi ukubona ngeso lengqondo konke okwenzeka ngaphakathi kwekhaya lakho, ihhovisi noma ibhizinisi kusuka kunoma iyiphi enye indawo lapho ukhona.
Izinzuzo zalolu hlobo lwamakhamera
Ngokuba nekhamera yokubhekwa kwevidiyo engu-360 ukujabulela ukucwiliswa okuphezulu emvelweni, ubuka izithombe noma amavidiyo ngombono wedivayisi ngokokuphakama nokuyiguqula njengokuthanda kwakho ukuze ubambe ngokucophelela wonke amakhona empahla yakho, ngokungeziwe:
Uzokwazi ukufinyelela izithombe namavidiyo abukhoma agcinwe efwini, ukuzisebenzisa uma kwenzeka zidingeka njengobufakazi bobugebengu noma ukuhlasela.
Eziningi zazo babe nomsindo wezindlela ezimbili njengengxenye yomsebenzi wabo wokulalela inkulumo, okungabaluleka kakhulu ezimweni eziphuthumayo. Lo msebenzi futhi ukuvumela ukuthi uxhumane nezingane zakho, izihlobo esezikhulile noma izilwane ezifuywayo, ukuze uqiniseke ukuthi ziphilile.
Kunamamodeli ahlukahlukene nokuklanywas, engavumeli nje kuphela ukuyilungiselela odongeni kodwa futhi nokuyisebenzisa iselula, ukuthi ibekwe ngokuqonda kunoma iyiphi indawo ofuna ukuyibheka.
Ngokuba I-engeli engu-360º ikunikeza umbono ophelele we-panoramic, ukunciphisa isidingo sokusebenzisa amanye amakhamera amaningi, ukunikeza ukumbozwa okugcwele endaweni ezungezile.
Banobuchwepheshe be-infrared LED ukuze ukwazi ukwazisa yonke imicimbi ebanjwe yibo, noma ngabe amalambu acishiwe.
Lawula wonke umsebenzi wempahla yakho ngaphandle kokushiya umbhede wakho noma ukubakhona endaweni; ngoba iMovistar Prosegur Alarmas ikunikeza uhlelo lokusebenza lweselula oluxhunywe kumakhamera wakho wokuqapha ividiyo ngokuvikelwa okungu-360, ongalisebenzisa ngokuthola i-inthanethi nokuba ne-Wi-Fi.
Ubumfihlo bakho buzoqinisekiswa yilawa makhamera ezobuchwepheshe, ngoba ngabantu abagunyaziwe kuphela abazokwazi ukufinyelela kubo futhi imininingwane yabo ihamba ngendlela ebethelwe ukugwema izehlakalo zokuvinjelwa noma zokuhlaselwa nge-cyber.
Uhlelo lokusebenza olufakwe yi-Movistar Prosegur Alarmas luzoba umlingani omkhulu, ngoba ngalo ungakwenzauzothola izaziso ezibonisa noma imuphi umsebenzi ongajwayelekile; Ungafinyelela okuqoshiwe phakathi nezinsuku ezingama-30 ezedlule futhi ulande futhi wabelane ngawo.
Ukusondeza kwamakhamera angama-360-degree kuyamangalisa, ngakho-ke uzokwazisa ngokuningiliziwe ngobuso noma esinye isici esikhanga wena.
Ngaphandle kokungabaza, amakhamera wokuqapha ividiyo anokuvikelwa okungu-360 amadivayisi amasha ozowathola namuhla ukugcwalisa uhlelo lwakho lwe-alamu; Ngabo kungenzeka ukuthatha uhambo olubonakalayo ngaphakathi kwendawo, ngokumane ubabeke endaweni ephakeme futhi babe sesimweni esivumela ukuthwebula inani elikhulu kakhulu lama-engeli.
Umbono ofinyelelwe yikhamera inikeza okuhlangenwe nakho okufanayo nokuthi ngabe uvakashele ipulazi, ngaphezu kokuhlehliswa kokuthatha izithombe noma ukurekhoda amavidiyo, uma kunesidingo.
Abasebenzisi abaningi banqume ukusebenzisa lolu hlobo lwekhamera ephathekayo njengengxenye yohlelo lwabo lwe-alamu; impela ngenxa ye- ukuguquguquka kwemisebenzi eminingi, ikhwalithi yesithombe kanye nokwenzeka kokuxhumana.
Kuyindlela enhle kunazo zonke, ngoba inamalensi angu-72º okuvula nokujikeleza okungu-2º, okungahanjiswa kuwo wonke thatha imininingwane yeminithi ezikhaleni ezinkulu, isondeza isithombe ukuze inikeze imininingwane nganoma isiphi isici esithathwa njengesisolisayo futhi ixwayise iziphathimandla ezinekhono ngesikhathi esifanele.
Uma ufuna ukuhlala ngokuthula futhi uvikele ukuphepha kwezihlobo zakho noma kwabasebenzi, futhi uvikele nempahla yakho ukuthi ingaphulwa yizigebengu, eMovistar Prosegur Alarmas uzothola ikhithi ehlangabezana nezidingo zakho kanye nebhajethi.
Kunconywa ukuthi okungenani ube neyodwa kulawa makhamera weselula, ukuze ube nakho konke ukuphatha ukuphepha kwakho, noma ngabe uphakathi kwempahla noma ungaphandle kwayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » Amakhamera wokubhekwa kwevidiyo anokuvikelwa okungu-360
I-SoloCam E20, ikhamera yangaphandle esebenza ngezindlela eziningi kakhulu evela e-Eufy [Buyekeza]
I-Onyx Dump Station kaRoborock yenza kube lula [Buyekeza]